Ovaltine awards scholarships to winners of 2018 nationwide Ovaltine smart drawing contest (2) – LYCA COMMUNICATIONS
Ovaltine awards scholarships to winners of 2018 nationwide Ovaltine smart drawing contest (2)
Date: December 8, 2018Author: Rahul0Comments
More than 200,000 students from 2,802 schools across Myanmar participated in the two-month long competition aimed at inspiring students to achieve future success
Emcee announcing the official opening of the event.
Yangon – December 8, 2018 – Ovaltine Myanmar today proudly awarded scholarships to winning students of its second 2018 Nationwide Art Drawing Competition – Ovaltine Smart Drawing Contest (2), which held from 15 August till 15 October 2018, and endorsed by the Ministry of Education. The theme this year was “Draw About Your Future Success with Ovaltine”
Followed by the huge success of its first competition held in October last year, this year Ovaltine’s competition attracted participation from 2,802 schools and 254,565 students across the country, that inspired students to think about their future success or ambition in life and allow them to createacreative, meaningful art work about it.
Speech by Daw Khin Mar Swe, Deputy Director General from the Department of Basic Education, Yangon Region Education Office
The scholarship awarding ceremony was held today at Novotel Yangon Max on Pyay Road and was attended by the winning students from cities all across Myanmar such as Hpa-An in Kayin State, Mandalay Division, Bago Division, Kyauktan, Yangon, and their family members.
Media interview session with Daw Khin Mar Swe, Deputy Director General from the Department of Basic Education, Yangon Region Education Office
“Following the success of last year competition, we collaborated again with Ovaltine this year for the Ovaltine Smart Drawing Contest (2), which also received very strong participation and positive feedback from students, teachers and parents. We are glad that Ovaltine brought this competition back to schools this year and have successfully hosted the awarding ceremony today. Havingastrong education isafoundation for future success and this competition will remind our students of the need to balance work hard and staying healthy,” said Daw Khin Mar Swe, Deputy Director General from Department of Basic Education under Yangon Region Education Office.
Scholarships were given out to winners of the competition according to three grade categories.
Scholarship winners of 2018 Nationwide Ovaltine Smart Drawing Contest (2)
Three winners in each grade category received scholarships of:
First Prize: 1 Million Ks
Second Prize: 500,000 Ks
Third Prize: 100,000 Ks
Consolation prizes of 50,000 Ks were also given to the fourth and fifth-place winners in each grade category.
Opening speech by Mr Ramon-Sheodore Villaflor, General Manager of Ovaltine Myanmar
Mr Ramon-Sheodore Villaflor, General Manager of Ovaltine Myanmar said, “We are very proud with giving the scholarships to the winners of nationwide Ovaltine Smart Drawing Contest 2, 2018today. Again we were extremely thrilled byavery strong response from students and schools across Myanmar participated in our second competition this year. We have seen so many creative and wonderful artworks from students about their ambition in life and the importance of having good health and nutrition. We hope the scholarships we have provided to the winning students will support them to achieve their dreams and future success.”
Media interview session with winner & parent
Ma Poe Satt Aung, an 8thGrade student from Kyauktan who is the first placed winner in the Grade6to Grade 8 category said that Ovaltine has provided the great platform to share her ambition through art creation and inspired her to dream more of her future.
“I was very excited to participate in this art drawing competition by Ovaltine. It was so much fun to think ofacreative way to express my ambition in my drawing. I am so grateful for this amazing opportunity from Ovaltine which I appreciate as it will support me with my further studies,” said Ma Poe Satt Aung.
MRTV-4 interview session with Mr Sudeep Chatterjee, Marketing Manager of Ovaltine Myanmar
To participate in the competition, students were required to get the competition form from their school and submitadrawing of their inspiration behind their future success. They could use water-based paint, crayons, pastel or any form of art materials for their drawing. Judging of winners was done with the help of judging panel comprising of experienced artists and cartoonists.
Ovaltine inspires kids and students in Myanmar over the years to achieve their dreams of the future. Good future can only be achieved with the help of good health. And Nutrition is most important to get good health, which is supported by Ovaltine. Ovaltine has been running an active annual Schools Programme, which involves visits to numerous schools to engage students about the importance of complete nutrition in their daily diet.
About Ovaltine Myanmar
Ovaltine originated in Switzerland in 1904 to combat malnutrition by Dr Wanders. The Ovaltine formula has improved over the years and now, drinking Ovaltine regularly helps consumers maintainahealthy diet with complete nutrition as it provides protein, carbohydrate, fat, andabundle of 24 essential vitamins and minerals. Ovaltine comes in two flavours in Myanmar – Ovaltine Malted Milk and Ovaltine Malted Choco.
In Myanmar, Ovaltine is produced by AB Food & Beverages (Thailand) Ltd. and distributed by its partners, DKSH (Myanmar) Ltd & Mega Life Sciences Myanmar. For more information about Ovaltine Myanmar and its activities, please visit http://www.facebook.com/OvaltineMM.
Ovaltine မှ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ၂၀၁၈ခုနှစ် သရုပ်ဖော်ပန်းချီပြိုင်ပွဲ(၂) ဆုရရှိသူများအား ပညာသင်ဆုကြေးများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်
ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ အောင်မြင်လှပသော အနာဂတ်ကို ပုံဖော်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂ လကြာ သရုပ်ဖော်ပန်းချီပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၂,၈၀၂ ကျောင်းမှ ကျောင်းသားပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ကျော် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၈)ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် – Ovaltine Myanmar မှ “အနာဂတ်အောင်မြင်မှုများဆီသို့ Ovaltine နှင့်အတူ စိတ်ကူးပုံဖော်ကြပါစို့” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ကျင်းပခဲ့သော ၂၀၁၈ခုနှစ် အိုဗာတင်း သရုပ်ဖော် ပန်းချီပြိုင်ပွဲ(၂)အတွက် ဆုရရှိခဲ့သည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် ပညာသင်ဆုကြေးများကို ယနေ့ ဂုဏ်ယူစွာ ပေးအပ်ချီးမြှင့် ခဲ့ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲကို လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လ ၁၅ရက်နေ့ မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့အထိ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုဖြင့် အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ် အောက်တိုဘာက ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပခဲ့ပြီး အထူးအောင်မြင်ရရှိခဲ့ရာ ယခုနှစ်ပြိုင်ပွဲတွင်မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၂,၈၀၂ ကျောင်းမှ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူပေါင်း ၂၅၄,၅၆၅ ယောက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများက မိမိတို့၏ အနာဂတ်အောင်မြင်မှုများ၊ ဘဝရည်မှန်းချက်များကို ပိုမိုထင်ရှားစွာ စိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ Ovaltine က ယခုပြိုင်ပွဲအား ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ Novotel Yangon Max တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပညာသင်ဆုကြေးများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ကျောက်တန်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့ အစရှိသော မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ မြို့အသီးသီးမှ ဆုရကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများနှင့် မိသားစုဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ထို့အပြင် ယနေ့အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ ဆုရကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ဆုကြေးများ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံး၊ အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မာဆွေ က “မနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ အောင်မြင်မှုနောက် အခုဒုတိယအကြိမ်မြောက် ၂၀၁၈ခုနှစ် အိုဗာတင်း သရုပ်ဖော်ပန်းချီပြိုင်ပွဲ(၂) အတွက်လည်း ကျွန်မတို့ ဝန်ကြီးဌာက အိုဗာတင်း နဲ့ထပ်မံ ပူးပေါင်း ခဲ့ပါတယ်။ မနှစ်က ပြိုင်ပွဲလိုပဲ ဒီနှစ်မှာလည်း ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ ပိုများလာပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ နဲ့ မိဘတွေဆီက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တုံ့ ပြန်မှုတွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ပြိုင်ပွဲကြီးကို ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်အဖြစ် တာဝန်ယူကျင်းပခဲ့ပြီး ဆုရကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို ပညာသင်ဆုကြေးတွေ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ Ovaltine ကိုလည်း ကျွန်မတို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေးဟာ တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်ရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီပြိုင်ပွဲဟာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို ဟန်ချက်မပြတ် ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့နဲ့ ကျန်းမာစွာနေထိုင်ဖို့အသိပေးရာလည်း ရောက်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အောက်ပါ အတန်းအလိုက် ပြိုင်ပွဲဝင်အုပ်စု သုံးခုမှ အနိုင်ရရှိသူများကို ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများ ချီးမြှင့်ပေး ခဲ့ပါသည်။
သူငယ်တန်းမှ ၂ တန်းထိ၊
၃ တန်းမှ ၅ တန်းထိနှင့်
၆ တန်းမှ ၈ တန်းထိ တို့ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်အုပ်စုအလိုက် အနိုင်ရရှိသူ သုံးဦးစီကို ပညာသင်ဆုကြေးအဖြစ် –
ပထမဆု ၁၀ သိန်းကျပ်
ဒုတိယဆု ၅ သိန်းကျပ်နှင့်
တတိယဆု ၁ သိန်းကျပ်စီ ပေးအပ်ချီးမြှင်ခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် ပြိုင်ပွဲဝင်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီမှ စတုတ္တဆုနှင့် ပဉ္စမဆုရရှိသူများအား နှစ်သိမ့်ဆု အနေဖြင့် ၅၀,၀၀၀ ကျပ်စီ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
Ovaltine Myanmar ၏ အထွေထွေ မန်နေဂျာဖြစ်သူ Mr Ramon-Sheodore Villaflor က “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ၂၀၁၈ခုနှစ် အိုဗာတင်း သရုပ်ဖော်ပန်းချီပြိုင်ပွဲ(၂) က ဆုရကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ အခုလို ပညာသင်ဆုတွေချီးမြှင့် ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းကိုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။ မနှစ်ကလိုပဲ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူနဲ့ ကျောင်းပေါင်းစုံက အားကြိုးမာန်တက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ကြတာတွေ့ရတော့ အရမ်းကို ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပန်းချီပြိုင်ပွဲတွေမှာ အကြီးဆုံး ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေရဲ့ အာဟာရပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့က ဘဝရည်မှန်းချက်အတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို တီထွင်ဖန်တီးမှုကောင်းကောင်းနဲ့ ဆွဲထားတဲ့ သရုပ်ဖော် ပန်းချီပုံပေါင်းများစွာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ ပညာသင်ဆုကြေးတွေနဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ အောင်မြင်လှပတဲ့ အနာဂတ် အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ရာမှာ ကူညီပံ့ပိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၆ တန်းမှ ၈ တန်းအထိ ပြိုင်ပွဲဝင်အုပ်စုတွင် ပထမဆု ရရှိခဲ့သည့် ကျောက်တန်းမြို့နယ်မှ ၈ တန်းကျောင်းသူ မပိုးဆက်အောင်က Ovaltine က သူမ၏ အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသရန်အတွက် Platform တခုကို ဖန်တီးပေးထားကြောင်းနှင့် သူမ၏ အနာဂတ် အိမ်မက်များကို ပိုမို ပုံဖော်တွေးခေါ်နိုင်စေခဲ့ကြောင်းပြောသည်။
“Ovaltine ကကျင်းပတဲ့ ဒီပန်းချီပြိုင်ပွဲကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် သမီးအရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်ကို အခုလို ပန်းချီကနေ သရုပ်ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့တာဟာ အရမ်းကိုပျော်ရွှင်ဖို့ ကောင်းပါ တယ်။ Ovaltine ကနေ ဒီလိုအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးခဲ့အတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီ ပညာသင်ဆုက သမီးရဲ့ အနာဂတ် ပညာရေးအတွက် အရမ်းအထောက်အကူပြုပါတယ်” ဟု မပိုးဆက်အောင်က ဆက်ပြောသည်။
Ovaltine ၏ သရုပ်ဖော်ပန်းချီပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ တက်ရောက်နေသော ကျောင်းမှ ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်လေ ျှာက်လွှာကို တောင်းယူပြီး မိမိတို့ အောင်မြင်ပိုင်ဆိုလိုသည့် အနာဂတ် ဘဝရည်မှန်းချက်အား ပေါ်လွင်ထင်ရှားစွာ သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားသည့် ပန်းချီကို အပ်နှံရပါမည်။ ရေးဆွဲ ရာတွင် ရေဆေး၊ ပုံဆွဲရောင်စုံဖယောင်းတံ၊ရောင်စုံခဲတံ စသည့် မည်သည့်ပုံဆွဲပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်မဆို အသုံးပြု ရေးဆွဲခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲ၏ အကဲဖြတ်ဒိုင်အဖွဲ့တွင် ဝါရင့် ပန်းချီဆရာကြီးများနှင့် နာမည်ကြီး ကာတွန်း ဆရာကြီး များဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ ပညာသင်ဆုများ ရွေးချယ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Ovaltine သည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များစွာကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို အားတက်သရော ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နှစ်စဉ် စာသင်ကျောင်းပေါင်းများစွာကို သွားရောက်ပြီး ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ နှင့် တွေ့ဆုံကာ နေ့စဉ် အစားအစာများထဲတွင် ပြီးပြည့်စုံသော အာဟာရပါဝင်ရန် အရေးပါပုံကို ပညာပေးသည့် လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်များလည်း ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
Ovaltine Myanmar အကြောင်း
Ovaltine ကို ၁၉ ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်များ အာဟာရချို့တဲ့မှု တိုက်ဖျက်ရန် ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ယခုအချိန်ထိ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် Ovaltine ထုတ်လုပ်သည့် နည်း စနစ်များ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး Ovaltine ကို နေ့စဉ်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် သောက်သုံးသူများအတွက် ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အသားဓာတ်၊ ကစီဓာတ်၊ အဆီဓာတ်တို့နှင့်အတူ ခန္ဓကိုယ် အတွက် လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် ၂၄ မျိုးတို့ ပါဝင်သောကြောင့် ပြီးပြည့်စုံသော အာဟာရကို ရရှိစေ ပါသည်။ Ovaltine ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် Ovaltine Malted Milk နှင့် Ovaltine Malted Choco ဟူ၍ အရသာနှစ်မျိုး ရရှိနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Ovaltine ကို AB Food & Beverages (Thailand) Ltd. မှ ထုတ်လုပ်ပြီး ၎င်း၏ အကျိုးတူစီးပွား မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသော DKSH (Myanmar) Ltd နှင့် Mega Life Sciences Myanmar တို့က ဖြန့်ချိ ပါသည်။ Ovaltine Myanmar ၏ အကြောင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Ovaltine Myanmar ၏ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်သော http://www.facebook.com/OvaltineMM တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
DKSH MyanmarLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarNutritionOvaltineOvaltine MyanmarPRPress ReleasePublic RelationsTeam LycaYangon
Previous Previous post: Yangon Dry Port facilities officially open for services
Next Next post: Thousands of children joined Lactogrow 3’s biggest birthday bash in Yangon
We wish everyone healthy and happiness in the occassion of Full Moon Day of Thadingyut Festival 🏮😇🙏🏻🌕🙏🏻😇 🏮
Gone But Never Forgotten. We Salute All Our Fallen Heroes 🙏🏻🇲🇲 🙏🏻
𝗝𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗦𝘂𝗿𝘃𝗲𝘆 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗼𝗳 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝗻 𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿
Now is the Time to unite & support the Civil Disobedience Movement. We are all in this together!!! 👏💪👏
Wish Youavery Happy 73rd Independence Day! 🇲🇲💛💚❤️🇲🇲
As we bid goodbye toachallenging 2020, We wish our Families, valued Clients & Friendsavery Happy New Year 2021! 🥳🤩🥰
© 2021 LYCA COMMUNICATIONS